Qiimaynta Ciyaartoyda Kulankii Man United & Chelsea –
Chelsea ayaa iska xaadirisay finalka FA Cup, kaddib markii ay 3-1 ku garaacday Manchester United oo ay semi-finalka kusii kulmeen.
Kooxda reer London ayaa deriskeeda Arsenal oo ay isku magaalo yihiin ay finalka wada ciyaari doonaan August 1, waxaanay labada kooxoodba meel iska soo dhigeen oo ay iska dhex saareen labada kooxood ee reer Manchester ee City iyo United.
Dhamaadka qaybtii hore ayay Chelsea goolka koowaad heshay, waxaana u dhaliyey Olivier Giroud oo ka faa’iidaystay qalad uu sameeyey goolhaye David Dea.
Markii lagu soo laabtay qaybta labaad ee ay laba daqiiqadood oo kaliya socotay ayuu mar kale De Gea u fasaxay goolkiisa kubbad dhulka socotay oo uu meel fog kasoo laagay Mason Mount, taas oo xawaare gaaban ku socotay, hase yeeshee goolhayaha reer Spain ayay farihiisa ka baxsatay, waxaanay gashay goolka.
Waqti dambe ayuu Harry Maguire iska dhaliyey goolka saddexaad ee Chelsea, halka rikoodhe aan waxba tarin ay Red Devils heshay dhamaadkii ciyaarta, kaas oo uu gool u beddelay Bruno Fernandes.
Guusha Chelsa oo soo afjartay 19 ciyaarood oo xidhiidh ahaa oo guul-darro la’aan ahaa oo Manchester United ay kusoo naaloonaysay, waxay Frank Lampard siinaysaa niyad wanaagsan oo uu Arsenal kaga hor tegi karo toddobaad iyo badh kaddib.
Weeraryahanka reer France ee Olivier Giroud ayaa loo doortay xiddigii garoonka, maadaama uu gool dhaliyey, shaqo badanna ka qabtay afka hore oo uu khalkhal ku ridayay difaaca Manchester United, gaar ahaan Lindelof iyo Harry Maguire oo uu laf dhuun-gashay ku ahaa.
Giroud ayaa helay qiimaynta ugu sarraysay ee ciyaarta oo ahayd darajada 9, laakiin waxay isku mid ahaayeen Rudiger, Zouma iyo Jorginho, hase yeeshee Olivier Giroud ayaa la siiyey xiddiga ciyaarta.
Ciyaartoyda Manchester United oo dhan ayay qiimayntooda ciyaartu aad u liidatay, waxaana fadeexadda ugu weyn ay ku habsatay David de Gea oo qiimaynta guud ee kulanka ka helay darajada 3, mana jirin ciyaartoy sidiisa oo kale u liitay.
Wan-Bissaka, Williams iyo Fred ayaa iyaguna aan wax badan dhaamin goolhayaha reer Spain oo min 4 ka helay qiimaynta ciyaarta.
Manchester United: De Gea (3), Wan-Bissaka (4), Bailly (5), Lindelof (5), Maguire (5), Williams (4), Matic (6), Fred (4), Fernandes (6), James (5), Rashford (5)
Beddelka: Martial (6), Pogba (5), Greenwood (5), Ighalo (NA), Fosu-Mensah (NA)
Beddelka: Abraham (NA), Hudson-Odoi (NA), Loftus-Cheek (NA), Pedro (NA)